Indlela Ukukhohlwa Mayelana Hackers Phakade - Amathiphu kusuka ku-Semalt
Ukuthola iwebhusayithi kufana nokudala isitolo sangempela noma ihhovisi. Iwebhusayithi yindawo lapho khonaizilaleli zingena futhi zenze ukuthenga kwazo. Njengoba wenza isayithi lakho lihlala, kufana nokuvula isitolo ukuvumela kubantu. Njengomphakathiesitolo, abantu kufanele bafike kuwebhusayithi yakho njengoba beza esitolo sangokwenyama, futhi mhlawumbe bathenge lapho bezwa sengathi benza kanjalo.
Noma kunjalo, umuntu angase afune ukuthola ulwazi ngaphandle kwemvume yakho. Njenjengasehhovisi elijwayelekile, abanye abantu kufanele bafike kuwebhusayithi yakho futhi bathole ukungena okungagunyaziwe noma ukusetshenziswa kwemininingwane yakho. Ngenxa yalokho,iminyango inezikhiya, nezakhiwo zinamasango. Isayithi idinga lolu hlobo lokuvikelwa kwabaduni. Abaqaphi bangena kumawebhusayithi bese bebaidatha ebucayi njengolwazi lwekhadi lesikweletu samakhasimende wakho. Kuyinkinga esemthethweni ukuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho ihlala ikhululekile kulawaukuhlaselwa. Ezimweni eziningi, amanye amazwe asabamba njengesibopho somthetho.
Esikhathini salesi sihloko, Igor Gamanenko, the i-Semalt Umphathi Wempumelelo Yekhasimende, utshela indlela yokuvikela iwebhusayithi yakho ekuhlaselweni kwe-cyber.
Ukuvikela ubumfihlo bamakhasimende
Abahlaseli babe nezinhloso eziningi ezingalungile uma benza i-hacks yabo. Kwezinye izimo,bafuna ukweba noma ukulimaza idumela lenkampani yakho. Kwezinye izimo, abaduni baphazamisa futhi bashiye izithombe ezihlekisayo kuma-akhawunti abantu abathintekayoukukhwabanisa..Uhlu lokulimala umonakalo ongakwenza lungapheli. Noma kunjalo, kunezinye izinyathelo, ezingenza iwebhusayithi yakho iphephile. Njengeamasela wangempela, kungenzeka ukuthi ayoba uma usuka emnyango uvulekile. Ezinye izenzo ongazisebenzisa ukubhekana nalezi zihlanganisa:
Hlalani usesikhathini. Kubalulekile ukuhlala wazi izinto ezintsha, abaduniangasebenzisa nganoma isiphi isikhathi. Ngenxa yalokho, ungaqaphela futhi usebenzise izinyathelo ezidingekile ngesikhathi, ngaphambi kokuba uhlasele. Amanye amawebhusayithi afana ne- "Izindaba zeHacker"ingakunika ulwazi olubalulekile.
Thintana nokulawula ukufinyelela. Ngewebhusayithi, ulwazi lomqondisi kufanele lube kakhuluimfihlo. Ukulawulwa komlawuli kungaba yindlela elula ye-hacker ukuthola ulwazi olugcwele lwewebhusayithi. Kubalulekile ukusebenzisa loginulwazi namaphasiwedi, okunzima ukuqagela. Futhi, ungakwazi ukukhawulela inombolo yemizamo yokungena ngemvume ehlulekile. Lokhu okuhlukilekufanele ihlanganise ama-imeyli kusukela umuntu angayinqoba kuqala futhi ashintshe iphasiwedi.
Ukuphepha kwenethiwekhi. Ukusetha udonga lomlilo wenethiwekhi kungasiza inkampani yakho igcineup okuningi on imizamo likaHack yilelo elaligqokwe. Omunye kufanele asethe futhi aqhubeke nokubuyekeza izindonga zomlilo kanye nokuqinisekisa ukuthi amakhompiyutha alawula kahle.Isibonelo, amakhompiyutha angakwazi ukuphuma emva kwemizuzu embalwa yokungasebenzi.
Ukuphepha kwewebhusayithi nabasebenzisi bayo kubaluleke kakhulu. Abaqaphi bangeningiamathuluzi namasu abawasebenzisa ukuze bafike kumawebhusayithi futhi benze ezinye zezinto zabo ezimbi. Ezinye iziphuphutheki eziqhamukayo zihlanganisa abantuukuqoqa idatha yekhadi lesikweletu kusuka kuwebhusayithi futhi ukuzithengisa ngenetha elimnyama. Ukuze ugweme izinkinga ezinjalo, abanikazi besayithi bangasebenzisa le mhlahlandlelaqinisekisa ukuthi kukhona ukuphepha okwanele nokuphepha. Lezi zinyathelo zingakusindisa, inkampani yakho noma abasebenzi bakho izigidi zemali.